Kaposi Sarcoma (ကာပိုးစီးဆာကိုးမား အရေပြားကင်ဆာ) - Hello Sayarwon
Kaposi Sarcoma (ကာပိုးစီးဆာကိုးမား အရေပြားကင်ဆာ)
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Kaposi Sarcoma (ကာပိုးစီးဆာကိုးမား အရေပြားကင်ဆာ)
Kaposi Sarcoma (ကာပိုးစီးဆာကိုးမား အရေပြားကင်ဆာ) ကဘာလဲ။
Kaposi’s sarcoma သည် အရေပြားကင်ဆာတစ်မျိုးဖြစ်ပြီးအရေပြားအောက်၊ ပါးစပ်အနားသတ်တစ်လျှောက်၊ နှာခေါင်း၊ လည်ပင်းနှင့် တခြားအင်္ဂါများတွင် ပုံမှန်မဟုတ်သည့် တစ်ရှူးအချပ်များကြီးထွားစေပါသည်။ ဒီအချပ်ပြားများသည် နာကျင်မှုကို ဖြစ်စေပြီး လူနာကို မသက်မသာခံစားရစေနိုင်ပါသည်။
ကုသမှုမခံယူပါကအချပ်ပြားများသည် အစာချေစနစ်ထဲ၊ အဆုတ်ထဲထိပြန့်ပွားသွားကာသွေးယိုခြင်း၊ အသက်ရှူရခက်ခြင်းတို့ကို ဖြစ်ပွားစေနိုင်ပါသည်။
Kaposi Sarcoma (ကာပိုးစီးဆာကိုးမား အရေပြားကင်ဆာ) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
၎င်းသည် အတွေ့ရများသောရောဂါမဟုတ်ပါ။ လူဦးရေ၏ ၁ရာခိုင်နှုန်းလောက်သာ Kaposi’s sarcoma ရှိနေခြင်း ဖြစ်သည်။ Kaposi’s sarcoma သည် အမျိုးသားများတွင် ပိုတွေ့ရ၏။ ရောဂါဖြစ်ပွားနိုင်သော အချက်အလက်များကို လျှော့ချခြင်းအားဖြင့် စီမံနိုင်ပါသည်။ အချက်အလက်များထပ်မံသိရှိဖို့အတွက် ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါသည်။
Kaposi Sarcoma (ကာပိုးစီးဆာကိုးမား အရေပြားကင်ဆာ) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
Kaposi’s sarcoma ၏ ယေဘုယျအကျဆုံးလက္ခဏာသည် အရေပြားတွင် အကွက်များအနာများထခြင်းဖြစ်သည်။ အကွက်များသည် ခရမ်းရောင်နှင့် အနီရောင်များဖြစ်နိုင်သည်။
၎င်းတို့ိကိုခြေထောက်အောက်ပိုင်းနှင့် မျက်နှာတို့တွင် တွေ့ရ၏။ ၎င်းတို့သည် ကြည့်ရဆိုးသော်လည်း တိုက်ရိုက် မထိခိုက်စေနိုင်ပါ။
သို့သော် ၎င်းတို့သည် ခြေထောက်နှင့်မျက်နှာကို ရောင်စေပြီး နာကျင်ခြင်းနှင့် မအီမသာဖြစ်မှုကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။
Kaposi’s sarcoma အကွက်များမျက်နှာတွင်ထလျှင် အန္တရာယ်ကြီး၏။ ၎င်းသည် ပြန်ရည်ကျိတ်များ၊ အစာအိမ်နှင့် အဆုတ်အား အလွယ်တကူပျံ့သွားစေနိုင်သည်။
တွေ့ရများသောလက္ခဏာသည် ခရမ်းနီရောင်အပြောက်များဖြစ်ပြီး ခြေထောက်အောက်ပိုင်းများတွင် တွေ့ရပါသည်။ Kaposi’s sarcoma ကို နှာခေါင်းနှင့် မျက်နှာ၏ကျန်သောအပိုင်းများတွင်လဲတွေ့နိုင်ပါသည်။
၎င်းသည် ပြန်ရည်ကျိတ်များ၊ အစာအိမ်နှင့် အဆုတ်များဆီသို့ ပျံ့နိုင်၏။ အကယ်၍၎င်းသည် အစာအိမ်တွင်ဖြစ်လျှင် သွေးထွက်ခြင်းနှင့် ဗိုက်နာခြင်းများဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။
အဆုတ်တွင်ဖြစ်လျှင် အသက်ရှူရခက်ခြင်း၊ အသက်ရှူမဝခြင်း၊ မောခြင်းများ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
အနာကွက်များကိုသတိထားမိလျှင် ဆရာဝန်နှင့် ပြရမည်။ Kaposi’s sarcoma သည် ကင်ဆာတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး တခြားအင်္ဂါများဆီသို့ မပျံ့နှံ့ခင်တွင် ထိန်းချုပ်သင့်သည်။ အောက်တို့မှတစ်ခုခုရှိလျှင် ဆရာဝန်နှင့်ဆက်သွယ်ပါ။
• အရောင်ပြောင်းသည့်အနာတစ်ခုခုမျက်နှာ၊ နှာခေါင်းနှင့် ခြေထောက်များတွင် တွေ့လျှင်
• နာလျှင်၊ အသက်ရှူရခက်မောလျှင်၊ သွေးအန်လျှင် သို့မဟုတ် ပြန်ရည်ကျိတ်များရောင်လျှင်
သင့်ဆီမှာအထက်ဖော်ပြပါ ရောဂါလက္ခဏာတွေထဲမှ တစ်ခုခုများရှိနေမယ်ဆိုလျှင် သို့မဟုတ် မေးခွန်းတစ်ခုခုရှိနေမယ်ဆိုလျှင် ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။
လူတိုင်း၏ခန္ဓါကိုယ်တုံ့ပြန်မှုသည် မတူညီနိုင်ပါ။ သင့်အခြေအနေအတွက် ဘာအကောင်းဆုံးလဲဆိုတာကိုသင့်ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်တာကအကောင်းဆုံးပါပဲ။
Kaposi Sarcoma (ကာပိုးစီးဆာကိုးမား အရေပြားကင်ဆာ) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
ဖြစ်ပွားစေသည့်အကြောင်းရင်းသည် ရေယုန်ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး (HHV-8) ကြောင့်ဟုထင်ရသည်။ ဒီဗိုင်းရပ်စ်သည် တခြားသူများအား လိင်မှတဆင့် သို့မဟုတ် အခြားသောနည်းများဥပမာမိခင်မှသန္ဓေသားသို့ကူးခြင်းဖြင့် ကူးစက်နိုင်သည်။ (အာဖရိကနိုင်ငံများတွင် တွေ့ရများ၏။)
Kaposi’s sarcoma အမျိုးအစားလေးမျိုးရှိပါသည်။
Epidemic, classic, endemic နဲ့ iatrogenicဟူ၍ဖြစ်သည်။
• Epidemic Kaposi’s sarcoma –
ဒီရောဂါသည် HIV ပိုးကြောင့်ဖြစ်ပွားခြင်း ဖြစ်သည်။ HIV ပိုးရှိသူထံတွင် ဒီရောဂါပါ ရှိနေလျှင် AIDS ရောဂါ ဖြစ်ဖို့ ကျိန်းသေပါသည်။ (HIV သည်ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးဖြစ်ပြီး AIDS သည်ရောဂါဖြစ်သည်။ HIV ပိုးရှိသူတိုင်း AIDS အဆင့်သို့ရောက်ချင်မှရောက်မည်။)
• Classic Kaposi’s sarcoma –
ဒီရောဂါမျိုးသည် ခုခံအားနည်းသည့်လူများတွင် ကူးစက်ရောဂါကြောင့် ဖြစ်သည်။ သို့သော် epidemic Kaposi’s sarcoma ဖြစ်သူများလောက် ခုခံအားမနည်းပါ။
• Endemic Kaposi’s sarcoma –
ဒီရောဂါသည် လူငယ်များတွင်ဖြစ်နိုင်သည်။ (များသောအားဖြင့်အသက် ၄၀ အောက်) အာဖရိကလူမျိုးများတွင် တွေ့ရများ၏။
• Iatrogenic Kaposi’s sarcoma –
ကိုယ်အင်္ဂါအစားထိုးကုသမှုခံယူထားလျှင် သင်သည့် အစားထိုးသည့်အင်္ဂါအား တိုက်ခိုက်ဖယ်ရှားမှု မဖြစ်စေရန် ခုခံအားကိုဖိနှိပ်သည့်ဆေးများသောက်ရမည်ဖြစ်သည်။ ဒီအတွက်ကြောင့် ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ခံရပါက ဒီရောဂါမျိုး ဖြစ်လာစေနိုင်ပါသည်။
Kaposi Sarcoma (ကာပိုးစီးဆာကိုးမား အရေပြားကင်ဆာ) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာတွေက မြင့်တက်စေသလဲ
Kaposi’s sarcoma ဖြစ်ပွားနိုင်ချေကိုမြင့်စေသည့်အကြောင်းများမှာအောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်သည်။
• လိင် – အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် ဖြစ်နိုင်ချေပိုများသည်
• ရေယုန်ဗိုင်းရပ်စ် – ၈ (HHV-8) ကူးစက်ခံရလျှင်
• AIDS ရှိလျှင်
Kaposi Sarcoma (ကာပိုးစီးဆာကိုးမား အရေပြားကင်ဆာ) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
Kaposi’s sarcoma ကိုအတည်ပြုရန် ဆရာဝန်သည် ရောဂါရာဇဝင်မေးခြင်း ခန္ဓါကိုယ်အားစမ်းသပ်ခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်ပါလိမ့်မည်။ သင်၏ဆရာဝန်သည် နာကျင်မှုနှင့် မအီမသာခံစားရမှုရှိမရှိမေးပြီး အနာက ထိတာသိမသိ မေးပါလိမ့်မည်။ ရောဂါအမည် သေချာတပ် နိုင်ရန်အတွက် အသေချာဆုံးနည်းလမ်းသည် အသားစယူခြင်းဖြစ်သည်။
အသားစအတွက် ဆရာဝန်သည် အနာမှတစ်ရှူးစကိုယူပြီး အဏုကြည့်မှန်ပြောင်းနှင့် စစ်ဆေးမည်ဖြစ်သည်။ သင်၏ဆရာဝန်သည် HHV-8 ဗိုင်းရပ်စ်ရှိမရှိစစ်ဆေးရန်နှင့် HIV မရှိကြောင်း သေချာစေရန် သွေးစစ်ဆေးမှုကိုလုပ်ခိုင်းမည်ဖြစ်သည်။
တခြားနေရာများသို့ မပျံ့နှံကြောင်းသေချာစေရန် ဆရာဝန်သည် ဓါတ်မှန်၊ ကွန်ပျူတာဓါတ်မှန် သို့မဟုတ် မှန်ပြောင်းကြည့်ရန် တောင်းဆိုနိုင်ပါသည်။
Kaposi Sarcoma (ကာပိုးစီးဆာကိုးမား အရေပြားကင်ဆာ) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
ကုသမှုသည် ရောဂါပြင်းမပြင်းဘယ်လောက်ထိပျံ့မပျံ့ပေါ်မူတည်ပါသည်။ အနာသေးပါက ဆရာဝန်သည် ကုသမှုမပေးသေးဘဲနှင့် အနာကြီးလာမှုရှိမရှိကို စောင့်ကြည့်မည်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ အနာသည်ပိုပြင်းထန်ပါက ကင်ဆာဆေးသွင်းခြင်း ဓါတ်ရောင်ခြည်ကုသခြင်းများ ပြုလုပ်ရန် လိုနိုင်ပါသည်။
Kaposi’s sarcoma ၏ အရေးကြီးဆုံးကုသမှုသည် ခုခံအားစနစ်ကိုကောင်းမွန်ပြီးသေချာထိန်းချုပ်ထားသည့်အခြေအနေရှိနေစေရန် ဖြစ်သည်။
Ferri, Fred. Ferri’s Netter Patient Advisor. Philadelphia, PA: Saunders / Elsevier, 2012. Ebook
Kaposi's sarcoma. https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/kaposissarcoma.html. Accessed July 10,
Kaposi Sarcoma. http://www.cancer.org/cancer/kaposisarcoma/detailedguide/kaposi-sarcoma-
what-is- kaposi-sarcoma. Accessed July 10, 2016.
Sarcoma - Kaposi - Coping with Treatment. http://www.cancer.net/cancer-types/sarcoma-
kaposi/coping-with- treatment. Accessed July 10, 2016.
HIV, AIDS, and Kaposi’s Sarcoma. http://www.webmd.com/hiv-aids/guide/aids- hiv-opportunistic-
infections-kaposis- sarcoma__?page=1. Accessed July 10, 2016.Ferri, Fred. Ferri’s Netter Patient Advisor. Philadelphia, PA: Saunders / Elsevier, 2012. Ebook
infections-kaposis- sarcoma__?page=1. Accessed July 10, 2016.